Tsitsi Masiyiwa Founder and Co-Chair, Higherlife Foundation - Amazons Watch Magazine
The Capernaum Trust, one of the Masiyiwa’s investments, is also generously endowed and it invests its resources in an assortment of sophisticated financial instruments and property.
While the Capernaum Trust is Tsitsi Masiyiwa’s most popular philanthropic endeavour, it is far from the only one. Along with her husband, she is a co-founder of three other charities- the Christian Community Partnership Trust (CCPF), a charity that provides financial support for church and church organizations working in the least evangelized areas of rural Zimbabwe; the National Healthcare Trust Of Zimbabwe which provides financial support for medical drugs, human resources, transport in the event of a health crisis and the Joshua Nkomo Scholarship Fund – named after the late Zimbabwean nationalist which also awards scholarships to exceptionally intelligent Zimbabwean children.
These four foundations are part of the Higher Life Foundation, an umbrella organization for all the charity efforts of the Masiyiwas and Tsitsi Masiyiwa serves as Executive Chair.
Higherlife FoundationTsitsi Masiyiwa